Izindaba - Izici Ezithinta Amafilimu Ahlanganisiwe Ukuphilisa & Iziphakamiso Zokuthuthukisa
Izici Ezithinta Amafilimu Ahlanganisiwe Ukwelapha Neziphakamiso Zokuthuthuka
Ukufeza imiphumela emihle yokwelapha, kunezici eziningana ezidinga ukucatshangelwa, kufaka phakathi:
1. Ifomu legumbi lokuphulukisa nesimo esifanele: ijubane nenani lomoya oshisayo kusuka kudivayisi yokushisa nomhubhe; umhlabathi nezinhlangothi ezimbili noma eziningana zegumbi lokuphulukisa kunomoya oshisayo owanele futhi ofanayo; umehluko omncane phakathi kwangempela nokusetha kokushisa, nokulondolozwa kokushisa nokuchithwa kwemfucuza kuhlangabezana nezicelo; imiqulu yamafilimu kulula ukuyihambisa futhi uyithathe.
2. Imikhiqizo ihlangabezana nezicelo zobuchwepheshe.
3. Imisebenzi, inani le-corona, ukumelana nokushisa, njll.
4. Ama-adhesives: i-adhesive solvent, i-adhesive solventless, i-adhesive yesisekelo samanzi esisodwa noma kabili, i-adhesive melt enamathele, njll.
Leli phepha ligxile kakhulu kumafilimu wokunamathisela kanye nokunamathisela.
1. Amafilimu e-Lamination
Ukusebenza ngokomzimba, ukushisa nokumelana nokusebenza kwe-PE film, okusetshenziswa kabanzi, kuzoba ngcono, lapho ukuminyana kwe-PE kukhuphuka. Amafilimu e-PE anobuningi obufanayo kepha izinqubo ezahlukahlukene zokukhiqiza zinokusebenza okuhlukile.
I-CPE ingapholiswa ngokushesha, nge-crystallinity ephansi, ukubonakala okuphezulu kanye ne-turbidity ephansi. Kepha ukuhleleka kwamangqamuzana akujwayelekile, okwenza kube nokusebenza okungalungile kwesithiyo, okungukuhanjiswa okuphezulu. Futhi kuyefana ne-LDPE. Ngakho-ke, ukushisa kokushisa akufanele kube phezulu kakhulu uma usebenzisa amafilimu e-PE. Lapho ukumelana nokushisa kwe-PE kuthuthuka, ithempelesha elaphayo ingaba ngaphezulu.
2. Izinto zokunamathisela
2.1 Ethyl Isigcilikisha Esisekelwe
Ngokwenziwa kwamafilimu wokunamathisela kanye nokunamathisela, izimo zokuphulukisa zingahlukaniswa ngamazinga ahlukene:
1. Ithempelesha 35℃, isikhathi 24-48h
2. Ithempelesha 35-40℃, isikhathi 24-48h
3. Ukushisa 42-45℃, isikhathi 48-72h
4. Ukushisa 45-55℃, isikhathi 48-96h
5. Special, lokushisa kuka 100℃, isikhathi ngokusho kobuchwepheshe.
Emikhiqizweni ejwayelekile, ubheka ukuminyana, ukushuba, i-anti-block, ukusebenza kokumelana nokushisa kwamafilimu kanye nosayizi wezikhwama, izinga lokushisa elapha akufanele libe phezulu kakhulu. Imvamisa, i-42-45℃ noma ngezansi kwanele, isikhathi amahora angama-48-72.
Amafilimu wokuhlanza angaphandle, adinga ukusebenza okuphezulu nokumelana nokushisa okuhle afanele ukuphulukiswa kokushisa okuphezulu, njengaphezu kuka-50℃. Amafilimu angaphakathi, afana ne-PE noma ukuvalwa kokushisa kwe-CPP, alungele u-42-45℃, isikhathi sokuphulukisa singaba side.
Imikhiqizo ebilayo noma yokubuyisa, edinga ukusebenza okuphezulu nokumelana nokushisa okuphezulu, kufanele ihambisane nezimo ezelaphayo ezinikezwa ifektri yokunamathela.
Isikhathi sokuphulukisa kufanele sivumelane nezinga lokuqedela ukusabela, ukusebenza ngokulingana kokuqina nokusebenza kokushisa kokushisa.
Imikhiqizo ekhethekile ingadinga ukushisa okuphezulu okuphulukisayo.
2.2 Isinamathelisi Esingaxazululeki
Uma ukusebenza kokufaka uphawu kuhlangabezana nemfuneko, yemikhiqizo yokunamathisela engenasici, amafilimu angaphakathi anokuqina okuphansi, izinamathiseli zinama-monomers amaningi amahhala, okwenza kube nzima ukuwavala. Ngakho-ke, kunconywa ukwelashwa ngamazinga aphansi okushisa, ngo-38-40℃.
Uma isilinganiso sokuphothula ukuphendula sihlangabezana nezidingo, kufanele kubhekwe isikhathi esingeluli esinde.
Uma amafilimu wokufaka uphawu lokushisa anokuqina okuphezulu, izinga lokushisa elilapha kufanele libe ngama-40-45℃. Uma izinga lokuphothula ukuphendula nokusebenza kokuvala ukushisa kudinga ukuthuthuka, isikhathi sokuphulukisa kufanele sibe side.
Ukuhlolwa ngokuqinile kuyadingeka ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi, ukuqinisekisa ikhwalithi.
Ngaphezu, umswakama kufanele ucatshangelwe. Ikakhulukazi ebusika obomile, umswakama ofanele ungasheshisa izinga lokuphendula.
2.3 Ama-Adhesives Asuselwa Emanzini
Lapho ulamula i-VMCPP, umshini wokuvikela ngocwazi kufanele wome ngokwanele, noma ungqimba olukhanyisiwe luzokhiqizwa i-oxidized. Ngesikhathi sokuphulukiswa, izinga lokushisa akufanele libe phezulu kakhulu noma liphansi kakhulu. Izinga lokushisa eliphakeme lizoholela ekukhuleni okuphezulu kokungqubuzana.
2.4 I-Hot Melt Adhesive
Imvamisa khetha ukwelashwa kwemvelo, kepha ukusebenza kokunamathela ngemuva kokuncibilika kufanele kuqashelwe.
3.Ukulawula Ngokuqinile Ukuphulukisa Ithempelesha
Ngokuya ngabacwaningi, maqondana nesilinganiso sezinga lokuphendula, akukho ukusabela okungaphansi kweminyaka engama-30℃. Ngaphezulu kwama-30℃, njalo nge-10℃ ephakeme, izinga lokuphendula lithuthuka cishe izikhathi ezi-4. Kepha-keAkulungile ukuthuthukisa izinga lokushisa ukusheshisa izinga lokuphendula ngokungaboni, kunezici eziningana okufanele zibonwe：isilinganiso sangempela sokuphendula, amandla wokushayisana wokuqina namandla wokushisa wokushisa.
Ukufeza umphumela omuhle kakhulu wokwelapha, izinga lokushisa elilapha kufanele lihlukaniswe ngezici ezahlukahlukene, ngokusho kwamafilimu nezakhiwo ze-lamination.
Okwamanje, izinkinga ezivamile zinjengenzansi:
Okukodwa, ukushisa okuphulukisayo kuphansi kakhulu, okwenza isilinganiso sokusabela esiphansi, futhi umkhiqizo unezinkinga ngemuva kokuvalwa okushisayo noma okubilisiwe.
Okubili, ukushisa okuphulukisayo kuphakeme kakhulu futhi ifilimu yokufaka uphawu eshisayo inokuqina okuphansi. Umkhiqizo unokusebenza okushisayo okushisayo, ukushayisana okuphezulu kwe-coefficient nemiphumela emibi ye-anti-block.
Ukufeza umphumela omuhle wokwelapha, ukuphulukisa izinga lokushisa nesikhathi kufanele kunqunywe ukushisa kwemvelo nomswakama, ukusebenza kwefilimu nokusebenza kokunamathela.